Warbixin ku saabsan ciyaaro aad u xiisa badan oo maanta ka dhacay garoonka Mire Awaare, Garowe – Sool v Gedo (3-3) & Mudug v Banaadir (1-1). – Radio Daljir
Warbixin ku saabsan ciyaaro aad u xiisa badan oo maanta ka dhacay garoonka Mire Awaare, Garowe – Sool v Gedo (3-3) & Mudug v Banaadir (1-1).
Diseembar 16, 2010 12:00 b 0
Garowe, Dec 16 – Ciyaara aad u xiisa badana ayaa ay maanta isku arkeen xulalka gobollada Sool v Gedo oo gelinkii hore is arkay, halka Mudug v Banaadir-na ay is arkeen gelinkii dambe. Natiijada ciyaaraha ayaa ahayd barbardhac labada dhinacba. 4-ta xul ee kooxda B. Duqa degmada Waaciya oo aan ka waraysanay dhuxul-gubayaal hubysan oo ka dilaacay miyiga degamada Waaciya, Bari …
– Duqa degmada Xarfo, Mudug oo aan ka warysanay ceel biyood laga hirgeliyey degmada, baahina tiri doona dadka deegaanka …
Xulka Bari oo 2-0 kaga guulaystay J. Dhexe, iyo Sh. Dhexe oo 4-3 ku carraabiyey Bakool.
Gobolka Nugaal oo 1-0 ku guulaystay ciyaartii ugu horeysay ee tartanka ciyaaraha gobollada Somaliya.